Ciidan la’aan waa Cadawga ‘u’ jab!!W/Q Cabdinuur Faarax Maxamuud | RBC Radio
Ciidan la’aan waa Cadawga ‘u’ jab!!W/Q Cabdinuur Faarax Maxamuud
Posted on April 14, 2017 Maqaal, RBC, Wararka
Ciidan la’aan waa Cadawga ‘u’ jab!!
Waa seddex Astaamood oo la’ isku xardhey) oo’uu leeyahay Ciidanka xooga Dalka Soomaaliya. Ciidanka lugta, Badda, iyo Cirka(CXDS).
Sawiraddu waa Madaxweynaha Soomaliya Maxamad Cabdullahi iyo Ra’isulwasaare Xasan Cali Khayre oo ka qeyb galay sannad guuraddii 57,baad, ee dabbaldegga Ciidanka xogga dalka Soomaaliya waxayna xiran yihiin Tuutaha millatariga. goobti waa Caasimadda Soomaaliya. waxayna u egtahay mural dhisid CXDS).
Taariikh ahaan, ciidanka waddanka Soomaaliya wuxuu ahan jirey kan ugu xooggan badan Qaarada Afrika. Ciidanka Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaasi jiray in oo ‘uu gaaray tiri ahaan 350,000 ilaa 400,000 kun oo ciidan, diyaar ah Ciidanka soomaaliya waxaa la asaasay 1960kii, kadib markii Soomaaliya xornimadeeda kala wareegtay gumeystihii faranjiga, ee Ingiriiska iyo Talyaaniga.
Ciidamada Soomaaliya waxay ka koobnaayeen Ciidanka Badda Soomaaliya, Ciidanka Cirka Ciidanka lugta Soomaaliya iyo Ciidanka Booliska Soomaaliya.
12,April 1960, markii Qaramada madoobay ay Soomaaliya u oggalatay inay Ciidan dhisan karto ayaa la dhisay Ciidamada xogga Dalka Soomaaliya Taliyihii ugu horeeyeyee (CXDS), Yeesho waxuu ahaa (AUN) Genral Dauud Cabdulle Hirsi, kuxigeenkii suna waxuu ahaa AUN] General Maxamad Siyaad Barre.
1991, ayey burburen Ciidankii Soomaaliya kadib markii ay saraakil sarsare oo Ciidnka CXDS) jilbaha u dhigan Dawladdii milatarigu hoggaamineyey.
Tan iyo markii Soomaaliya Dawlad la’aanta noqotay waxaa guul daraystay dib usoo dhisidda Ciidankii Dalka in kastoo hada ay socoto sansan rajo oo ku aadan dhismaha Ciidan Qaran.
Waxaa hawada ka maqan oo xitaa an waxba laga hayn Ciidankii Cirka Soomaaliya iyo qalabkoodii, dhanka difaaca hawada Soomaaliya, waxana gebi ahaan baa’ba’ay Diyaaraddihii Daggalka Soomaaliya iyo Marakiibtii Daggalka ee Badda Soomaaliya.
Soomaaliya oo madax bannaanida heshay Qarnigii 20,naad waxaa hada madaxdeeda ilaaliya Ciidamo nabad ilaalinta oo ka socda Qaarada Africa weliba waddamo ay xornimada Soomaaliya uga horaysay.
Ugu dambayntiina Dawlada Madaxweyne Maxamad Cabdullahi Maxamad (Farmaajo) ayaa looga fadhiya fulinta ballan qaadkii ku aadana dhismo Ciidan Qaran.
Soomaalidu waxay ku maahmahda Eebbow Ciidan la’aan ha nadhigin oo micno ahaan ah Dal aan Cidan lahayn inuu gablan yahay.